भारतले लगायो ४३ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध - Aarthiknews
सोमबार, ०५ माघ २०७७ Monday, 18 January, 2021
भारतले लगायो ४३ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध
नयाँदिल्ली । भारतले मंगलबार अरु ४३ वटा मोबाइल एप्सलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । प्रतिबन्धित एप्सहरुमा सीमा विवाद जारी रहेका चीनका एप्सहरु पनि रहेका छन् । समाचार एजेन्सी एपीका अनुसार भारतीय सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिबन्धित एप्सहरुले भारतको सार्वभौमसत्ता र अक्षुण्णतालाई चुनौती दिएको जनाएको छ ।
प्रतिबन्धित एप्सहरुमा चीनको बहुराष्ट्रिय कम्पनी अलिबाबा ग्रुपसँग सम्बन्धित चारवटा एप्सहरु रहेका छन् । भारतले केही महिनाअघि लोकप्रिय भिडियो सेयरिङ एप टिकटक र मोबाइल खेल पब्जी समेतका चिनियाँ स्वामित्वमा रहेका केही मोबाइल एप्सहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारत सरकारले चिनियाँ मोबाइल एप्सहरुले भारतीय प्रयोगकर्ताका गोप्य विवरणहरु संकलन गरी चीन पुर्याएको आरोप लगाएको थियो ।
चीन र भारतबीच सीमावर्ती लद्धाखका विषयलाई लिएर महिनौंदेखि विवाद छ । तर, सैनिक र कुटनीतिक तहमा सीमा विवादका विषयमा वार्ताहरु भइरहे पनि तनाव जारी छ । यी वार्तामा अघि सारिएका विषयका बारेमा विवरण सार्वजनिक भइरहेको छैन ।
भारतको एप्स प्रतिबन्धलाई लिएर भारतीय सत्तारुढ दलले स्वागत गरेको छ । भारतमा हाल चिनियाँ मोबाइल एप्सहरु तिब्र गतिमा विस्तार र लोकप्रिय भइरहेका छन् । कतिपय चिनियाँ कम्पनीहरुले भारतीय प्रयोगकर्ताका रुचीलाई समेटेर एप्सहरु निर्माण गरेका छन् ।
भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन शुरु
विटकोइनको बजार अकल्पनीय विस्तार, प्रविधिले नगदको विस्थापन गर्दै
बाइडेनले सार्वजनिक गरे १९ खर्ब डलरको आर्थिक सहायता
बेलायतको अर्थतन्त्र २.६ प्रतिशतले खुम्चियो
कोभिड–१९ विरूद्धको ९५ प्रतिशत खोपको मात्रा विश्वका १० मुलुकमा सीमित : डब्लुएचओ
चेक बाउन्स मुद्दाका ३ अभियुक्त पक्राउ, ३ करोड जरिवानासहित कैद सजाय
चन्द्रागिरी हिल्सको आईपीओ यसै साताभित्र बाँडफाँट हुने
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आईपीओमा साढे १० अर्बभन्दा बढीको आवेदन
प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा दुगड नियुक्त
एनआईसी एशिया बैंकको १९ प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
स्टार्टअप आइडिया कलको युवा उद्यमी प्रवद्र्धन कार्यक्रम शुरु
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा अनलाइनबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन सकिने
मञ्जुश्री फाइनान्सको अध्यक्ष इन्दिरा पन्डित घिमिरेद्धारा सपथ ग्रहण
सिंगटी हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि बिक्रीमा
यी १० कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च बृद्धि
फेरि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको तयारी
स्वदेशी लघुवित्त र एनआइसी एशिया लघुवित्तको साधारण सभा, मर्ज प्रस्ताव लैजादै
एनआई सी एशिया लघुवित्त वित्तीयको साधारण सभा सम्पन्न
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेण्टको साधारण सभा माघ २५ गते, कति दिदै छ बोनस ?
मन्त्रिपरिषद् विस्तारः विक र दुगडलाई बिदा
यसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ इन्टरनेट बैंकिङ
नबिल बैंकको एटीएमको पासवर्ड बिर्सिनुभयो ? यसरी गर्नुहोस् रिसेट
राष्ट्र बैंकले तोक्यो अन्तर बैंक एटीएम कारोबारको शुल्क
नेपाल आयल निगम डिपोमा दुई करोड ५० लाखको लागतमा नयाँ प्रविधि जडान
नेपाल भित्रिनेमध्ये अमेरिकी नागरिकको संख्या अधिक
मूल्यवृद्धि ४.०५ प्रतिशतले बढ्यो, मूल्यवृद्धि तराईमा बढी